Chirongwa chemishonga yenjodzi: Kuvaka nekuchengetedza kititi chekubatsira kwekutanga - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Checkout Kambani, Hutano Dzidzo Kambani, Iyo Checkout Dhinda Kambani, Info Info Nhau, Wellness Nharaunda, Kambani Zvinodhaka Vs. Shamwari Dzidzo Yehutano Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Nhau Nhau Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Wellness Info Info, Hutano Dzidzo
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Chirongwa chemishonga yenjodzi: Kuvaka nekuchengetedza kititi chekubatsira kwekutanga
Chirongwa chemishonga yenjodzi: Kuvaka nekuchengetedza kititi chekubatsira kwekutanga
Dambudziko uye njodzi dzinongoitika dzoga kutyisidzira kune wese munhu, uye kune vanhu vanoda mishonga yekunwa kuti varape zvakakomba nyaya dzekurapa, kutyisidzira hakumire kana denda rapera, mafashama anoderera, kana moto kudzima.
Kana iwe ukatora mishonga inoponesa hupenyu, kana uri muchengeti wemumwe munhu anozviita, kudzidzira kugadzirira kwechimbichimbi kunofanirwa kuve chikamu chehurongwa hwako hwekuchengetedza.
Chii chinonzi kugadzirira kwechimbichimbi?
Kwekukurumidzira kugadzirira chiito chekuita mashoma, anozivikanwa zviito zvinowedzera yako nhanho yekuchengetedza panguva yedambudziko.
Dzimwe dzenjodzi inhau dzenyika dzese — kunge dutu rinosvika kudhorobha guru. Asi kwete zvese zvekukurumidzira zvinogadzira CNN. Nhengo yemhuri inogona kurwara zvisingatarisirwi kana gasi rinodonha rinogona kuda kuti rako rese ribude.
Ndeapi matanho mana ekugadzirira zvechimbichimbi?
Aya ndiwo matanho mana ekugadzirira:
Kunyangwe iwe uchizviziva kana kuti kwete, iwe nemunhu wese munharaunda menyu mune imwe kana yakawanda yezvikamu izvi izvozvi.
pane chinhu chakadai sekusatsumwa benadryl
Chikamu chekudzikisira inosanganisira zviitiko zvinodzora kukuvara kunoitika nechimbichimbi. Semuenzaniso, kubvisa matavi akaomarara kutenderedza chivakwa kunogona kudzivirira bhurashi moto kuti usvike pamba.
Chikamu chekugadzirira iko kudzidziswa kwezviitiko zvisingakwanise kudzikiswa. Moto usingadzorwe musango ungangoda varidzi vedzimba kuti vabude zvisinei kunyatsoita kwavo kwekudzivirira. Mabasa anogona kusanganisira kugadzira kit yechimbichimbi kana bhegi.
Chikamu chekupindura inosanganisira zviito zvakatorwa panguva uye nekukurumidza mushure mekukurumidzira. Mubereki achiburitsa mhuri yavo semoto unosvika muenzaniso wekupindura chikamu chikamu.
Chikamu chekudzorera inotanga kana hupenyu hwatanga (kunyanya) kudzokera pane zvakajairwa. Hupenyu nepfuma hazvichatyisidzirwa uye zvikoro nemabhizinesi zvatanga kuvhurwa. Ikozvino kutarisisa kwachinjisa kugadzirisa kugadzirisa kwemuviri, kwemari, uye kwepamoyo kunokonzerwa nenjodzi. Kudzoreredza kunosanganisira kuona maitiro ekudzora kukanganisa kubva mune ramangwana, zvakafanana emergency uye kudzoreredza chikamu chekudzikisira.
Ndeapi mhando dzekukurumidzira dzaunofanirwa kugadzirira?
Zvichienderana nekwaunogara, dzimwe emergency dzinowanzoitika kupfuura dzimwe. Kunzwisisa njodzi munzvimbo yako kunogona kutungamira kufunga kwako paunenge uchikudziridza hurongwa hwekukurumidzira kana kugadzirira njodzi.
Vanoronga zvechimbichimbi vanoparadzanisa njodzi muzvikamu zvitatu.
Diki emergency (semuenzaniso, imba yekugara moto)
Yakatemerwa uye inogona kuitika emergency (semuenzaniso, mafashama emunyika)
Njodzi huru (semuenzaniso, kudengenyeka kwenyika)
Nharaunda yese iri pasi penjodzi dzakasiyana, uye munhu mukuru wese ane mabasa akasiyana. Mumwe muridzi wechipfuwo anogara munzvimbo yemafashama achaita zvirongwa zvakasiyana zvekugadzirira kupfuura amai vevashanu mune rakakura guta rakatarisana nekudengenyeka kwenyika.
Funga kuti ndedzipi emergency dzinogona kuitika munharaunda yako, uye chii chingadewe kwauri mune zvese zviitiko.
Kushandisa mishonga panguva yekukurumidzira
Kufunga nezvemishonga yako inoda panguva yekukurumidzira kunogona kuita sarudzo yehupenyu-kana-kufa. Wese munhu anoda mishonga anofanirwa kufunga kuti vanozochengeta sei kupihwa kwavo panguva yemhando dzekukurumidzira dzavanogona kusangana nadzo.
Chikamu chekugadzirira ndicho chakanyanya kukosha kufunga nezvazvo kuona mukana wekuwana mishonga. Chii chaungaite kana paitika njodzi isingatarisirwi iwe haugone kudzikisira kunge kudengenyeka kwenyika kwakasimba kana mafashama emakore zana? Izvi ndizvo zvinhu zvekufunga nezvazvo.
Chengetedza up-to-date rondedzero yemishonga inosanganisira dosi uye yakaratidza kushandiswa
Zvekukurumidzira inguva dzinonetsa, uye haudi kuvimba nendangariro kana uchida kutsiva mishonga yako kana yevanhu vanoida. Ko kana iwe uchida piritsi iwe yawave uchinwa kwemakore uye iwe usingakwanise? Ko timu yekutsvaga neyokununura inoziva here mushonga waunoda?
Ziva kuti imarii mishonga iripo
Chengeta karenda rinoratidza kana mushonga wako uchapera. Izvi zvinokubatsira iwe kurangarira kuodha zvekare kuzadza uye nekupa irinokurumidza mareferensi mune zve emergency. Iwe unozogona kuona kuti kukura kwako kwakakura zvakadii, uye kana iwe ukave nekunyevera pachine nguva nezvedanho riri kuuya iro rinogona kukanganisa kupinda kune pharmacy yako, iwe unozoziva kana iwe uchida kukurumidza kuwana kutanga kuzadza.
Isa mabhodhoro emishonga kana mapakeji mumidziyo yakasunga-mvura
Midziyo yekuchengetera mishonga inogona kutora mafomu mazhinji kubva mudura hombe remadhirowa muchipatara kuenda kupurasitiki repiritsi bhokisi. Kana kunaya kukuru kwemvura kana mafashama iri njodzi kunharaunda yako, funga kuchengetedza mishonga yako mumudziyo wakasunga-mvura senge bhini rekuchengetedza chikafu.
Kana mvura yemafashama ikasangana nemishonga yako, zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti usashandise kunze kwekunge zvichinyanya kukosha.
nzira dzekubvisa hutachiona mbiriso kumba
Iva nechinotonhora chiripo chemishonga inoda firiji
Njodzi dzinongoitika dzega senge moto wesango, kudengenyeka kwenyika, uye madutu anogona kutora gidhi remagetsi kunze. Kana firiji yako ikamira kushanda, waizoita sei kuti mishonga yako itonhorere? Chero ani anotora mishonga yemufiriji anofanirwa kuchengeta inotonhorera diki inotakurika paruoko. Gel yekufambisa inotonhorera haina kushata (kunyange ice richashanda, zvakare).
Pamushonga we insulini unoshandiswa kurapa yakakwira ropa glucose inosangana nechirwere cheshuga, firiji inokurudzirwa asi hazvidi zvachose. Insulini inogona kusiiwa isina kuiswa firiji kwemazuva anosvika makumi maviri nemasere, chero bedzi tembiricha ichigara pakati pe59 kusvika 86 degrees Fahrenheit. Kana iwe uchigara munzvimbo ine tembiricha yakanyanyisa, funga kuti ungachengeta sei insulin mukati meiyi tembiricha renji kana paine kubuda. Iyo inotonhorera inogona kushandiswa kuchengetedza insulini yakachengeteka. Insulini haina njodzi kutora kana ikaratidzwa kune tembiricha yakanyanyisa, zvinongorasikirwa nekushanda. Sezvo insulin iri mishonga inochengetedza hupenyu hwechirwere cheshuga mhando 1 varwere, kuchengetedza insulini pane yakakwana tembiricha kwakakosha. Tevedza FDA kurudziro ye insulin kushandiswa mune emergency , uye ona izvi insulin chengetedzo chati ruzivo pamusoro pezvimwe zvigadzirwa.
Sechikamu chehurongwa hwako hwekugadzirira zvechimbichimbi, bvunza chiremba wako kana wemishonga kana chero imwe yemishonga yako ichida firiji.
Heino runyorwa rwemishonga yakajairika yemishonga inofanirwa kugara mufiriji.
Iri harisi rondedzero yakazara, ndokumbira ubvunze kune wako wemishonga kuti uwane mishonga yako ingangoda firiji.
Iwe unowana sei mishonga mune yekukurumidzira mamiriro?
Chero chemishonga inogona kupa zvekukurumidzira zvinozadza mimwe mishonga yakakosha kana murwere achinge achingoda kurapwa. Mienzaniso inosanganisira mishonga inorwisa mabhakitiriya, insulin, uye kununura mweya.
Sezvaunofunga nezvekuzara kwekukurumidzira kunoenderana nehurongwa hwekugadzirira zvechimbichimbi, ziva nezvezvirambidzo izvi:
Iwe unofanirwa kuve nemushonga kuti uwane kuzadzwa kwechimbichimbi.
Dambudziko rekukurumidzira rinozadza (kunyanya) kungova nemazuva manomwe chete.
Iwe unofanirwa kubhadhara mutengo wakazara wemushonga kumberi kukhemisi, uye kunyorera kuzere kana kukwana kudzoreredzwa gare gare. Kuwanda kwekudzoserwa kwako kunoenderana nehurongwa hwako.
Nezvirongwa zvakawanda zvehutano, kana iwe ukaenda kune kunze-kwe-network chemishonga, haugone kubhadharwa.
Mimwe mirau yakatenderedza inozadza emergency (kusanganisira ndeipi mishonga inobvumidzwa) inosiyana zvichienderana nehurongwa hwako hweinishuwarenzi
Kune mishonga isingafungidzirwe nechimbichimbi inozadza, hauzokwanisi kuzadzikiswa kusvikira iwe wagona kubata mupi wako wehutano.
Mishonga yekutanga, sekudzivirira marwadzo, inogona kuwanikwa munzvimbo dzekugara kana yakaunzwa nezviremera manejimendi manejimendi .
Chii chinonzi kititi chekutanga chekubatsira?
Chikwata chekutanga chekubatsira muunganidzwa wemidziyo inogona kushandiswa kudzikisira nyaya dzehutano kudzamara kurapwa kwenyanzvi kwave kuwanikwa. Iyo Centers for Disease Control inokurudzira kuti mhuri dzive nechikwata chekukurumidzira izvo zvinofanirwa kusanganisira zvese zvekubatsira zvekutanga uye zvisiri zvekurapa.
Chii chinofanirwa kunge chiri mune yekutanga rubatsiro kit?
Red Cross inokurudzira zvinhu izvi kititi chekubatsira kwekutanga :
Kubata kumanikidza kupfeka
Anonamira jira tepi
Mishonga inorwisa mabhakitiriya mapakeji
Antiseptic pukuta mapaketi
Aspirin (81 mamirigiramu imwe neimwe)
Pakarepo inotonhora compress
Hydrocortisone mafuta mapaketi
Bhandi rakapetwa rezauze
Yakashongedzwa gauze pad
Yechimbichimbi yekutanga rubatsiro kuraira gwara
Chii chisingafanirwe kuve mune yekutanga rubatsiro kit?
Usaise chero chinhu mune yako yekutanga rubatsiro kit iyo inogona kusvibisa zvinhu zvako kana neimwe nzira kuzvipa zvisingakwanisike. Mumwe muenzaniso: Girazi re mercury thermometer, iro rinogona kutyora nekudeura kemikari ine njodzi uye girazi rakatyoka.
Kana iwe ukatenga pre-yakaungana yekutanga rubatsiro kit kubva kune inozivikanwa mbiri, iwe haufanire kunetseka nezve njodzi iyi.
inotora nguva yakareba sei valtrex kushanda
Chii chinonzi bhegi?
Bhegi rekuenda iunganidzwa yezvako zvemunhu uye zvekurapa izvo zvinokubatsira iwe kurarama padambudziko uye kupora nekukurumidza kubva kumhedzisiro. Chikwata chako chekutanga chekubatsira (kana kuenda chikwama chemishonga bhegi) chinongova chinhu chimwe chete chebhegi rekuenda.
Izvo zvirimo zvehomwe bhegi rako zvinoenderana nemamiriro ako ega uye nekwaunochengeta.
Bhegi rekuenda mumba mako, kwaunenge uine nzvimbo yakawanda yekuchengetera, rinogona kukura zvakanyanya kupfuura bhegi rekuhofisi kwako kana mumota yako.
Aya ndiwo mapoka akajairwa kufunga nezvazvo:
Hunhu hwemunhu nehutsanana
Mishonga yemishonga uye zvirevo
Mafoni ekutaurirana uye majaja
Kuzivikanwa kwako pachako uye magwaro emari
Nzira dzekuchengeta vana vakabatikana
Kumba enda mabhegi
Bazi reHomeland Security rinokurudzira kuti yako kititi chekukurumidzira kumba chine zvekushandisa zvakakwana zvekuti unogona kurarama kwemaawa makumi manomwe nemaviri kana paitika njodzi.
Izvo zvakasarudzika zvinhu zvaunoda kuzadzisa icho chinangwa zvinoenderana nesaizi yemhuri yako uye nekwaunogara.
Tora mvura, semuenzaniso. Imba yako yekukurumidzira kit inofanirwa kuve nemarita matatu emvura pamunhu (galoni pamunhu pazuva) uye zvimwe zvakanyanya kana uchigara munzvimbo inopisa kwazvo.
Ko chikafu? Kugoverwa kwemazuva matatu kwemhuri ine vana vachiri kuyaruka kuchave kwakanyanya kudarika kumhuri ine mwana wemakore manomwe. Kana iwe uine mwana, chako kit chimbichimbi chinofanirwa kuve nemazuva matatu 'akakosha fomura yemwana.
Kupona kwekuda kuchasiyana. Kana iwe uchigara muVermont, mazuva matatu ekupona angangoda kugara uchidziya sosi uye magumbeze anorema. MuHawaii, rimwe gumbeze diki rekukurumidzira rinogona kuita.
Funga nezvemhando yechimbichimbi yaungangosangana nayo munharaunda yako. CDC inokurudzira zvinhu zvakananga kune vanhu vari munzvimbo dzinowanzoitika kudengenyeka kwenyika (semuenzaniso, magirafu anorema, anogara kwenguva refu ekuchenesa marara, uye tambo yekufambisa kununura). Vanhu vari munzvimbo dzinowanzoitika mafashama vangangoda kutarisisa zvakanyanya kuti vanozochengeta sei zvinhu zvakaoma kana vakabuda mumvura yakamira.
Mota uye nekubasa enda mabhegi
Iwe haugone kuchengeta zvinhu zvakawanda zvekupona mumotokari yako kana kubasa kwako sezvaungagone mumba mako. Asi zvekukurumidzira zvinoitika chero nguva, saka iwe unofanirwa kufunga zvaungade kuva newe.
Zvekare, yako kit ichaenderana nemamiriro ako. Kana hofisi yako iri kufamba chinhambwe kubva kumba kwako, pamwe haudi seyakakura kititi chekukurumidzira sezvaungaita kana ukafamba mamaira makumi matatu kuenda kubasa. Kana usingawanzo kutyaira kunze kweguta, haudi zvinhu zvakawanda sezvaungaita kana uchiwanzozviwana uri munzira huru dzekumaruwa.
Mashandisiro ekuita chirongwa chekukurumidzira kugadzirira template
Vanoremekedzwa zviremera senge American Red Cross uye iyo Dhipatimendi rekuchengetedzwa kwenyika ipa yakajairwa emergency emergency kugadzirira matemplate.
Nyika yako kana imwe hurumende yemunharaunda inogona zvakare kuve nematemplate akananga kunharaunda yako. Iyi yevagari veMontgomery County, Maryland, inosanganisira ruzivo rwemunharaunda-yakadai seinobatsira kambani nhamba dzenhare uye kuwanda kwenzvimbo dzenhepfenyuro dzemuno.
Aya ma templates ekugadzirira zvechimbichimbi anobvunza mibvunzo yakakosha nezve iwe nemhuri yako, uye ine zvirevo zvakajairika zvinoshanda kune wese munhu. Mimwe mibvunzo yakanangana nezve mushonga wemishonga iri pakati pavo.
Kuronga izvozvi kunovimbisa kushomeka kushoma gare gare
Kudzidzira kugadzirira kwekukurumidzira kunopa chokwadi chinodiwa mukuvhiringika kwemamiriro ekukurumidzira. Mhinduro kumibvunzo yakaita sekuti ndichawana sei muyero wangu unotevera we insulin? ichave yatotemwa. Kugadzirira izvozvi kunogona kudzivirira njodzi kune hutano hwako iwe kana mhuri yako.
Prevnar 13 vs. Pneumovax 23: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Hydrocortisone vs. cortisone: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
nzira yakanakisa yekubvisa nzara fungus
ndeupi musiyano uripo pakati pe doxycycline ne doxycycline hyclate
ndinogona kutenga nebulizer kuma walgreens
chii chaunogona kutora kuti utachiona hwembiriso
inoita mangwanani mushure memapiritsi anoshanda mushure memazuva matatu